Boztepe wuxuu isku diyaarinayaa Xilliga Xagaaga | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka BanaadirCiidamada 52Boztepe wuxuu isku diyaarinayaa Xilliga Xagaaga
21 / 04 / 2020 Ciidamada 52, SAWIRADA, GUUD, Gobolka Banaadir, TURKEY, TELPHER
Boztepe ayaa isu diyaarinaya xilli xagaaga
Dawlada Hoose ee Magaalada Ordu waxay ku soo gabagabowday Buuga iibka ah ee Buffet iyo Shaqada Dhisida Dhulka ee Boztepe, oo kamid ah meelaha soo jiidashada magaalada.
Wadarta 25 xirmooyinka iibka ah, oo 27 ka mid ahi ay yihiin iibinta alaabada maxalliga ah, ayaa laga abuuray waddada, taas oo loo xiray gaadiidku si loogu siiyo muwaadiniinta doonnida aan lagu tirin karin.
“WAA IN AY KU DHAMMAANSAA MARKA MAALADA”
Bülent Şişman, Kuxigeenka Xoghayaha Guud ee Dowlada Hoose ee Magaalada Ordu, oo sheegay in shaqooyinka Boztepe la dhamayn doono dhamaadka bisha May, ayaa yidhi, “Waxaan xidhnay wadadii baabuurta ee Boztepe ilaa taraafikada waxaanan bilownay hawlihii kaabayaasha. Waxaan sidoo kale ku deeqi doonnaa 27 xirmooyinka iibka ah ee jidkan oo loo furi doono taraafikada kaliya xaalado gaar ah iyo khasab ah. 2 ka mid ah dukaannadani waxay noqon doonaan dukaanno iib ah oo joogto ah, halka kuwa kalena ay noqon doonaan dukaanno lagu iibiyo alaabada maxalliga ah ee lagu sameeyo Ordu. Si loo horumariyo siyaasadaha beeraha loona u suuro geliyo beeraleyda Ordu inay ka iibiyaan wax soo saarkooda halkan, waxaan u qoondeynay inta ugu badan buffets iibinta alaabada maxalliga ah iyadoo la raacayo tilmaanta Wasiirkayaga. Mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee loo dalxiis tago ee Boztepe Ordu. Sidaa darteed, waxaan sii wadnaa hawlaheena qurxinta iyo qurxinta si dhakhso leh. Waxaan higsaneynaa inaan halkaan ku dhameystirno shaqooyinka halkan dhamaadka May oo aan sare u qaadno xilli ciyaareedka. ”
KU SAABSAN AXLE AT 450 M LENGTH
Unugyada Iibka Boztepe Buffet iyo Shaqada Dhismaha Muuqaalka Dhulka waxaa loogu talagalay celcelis ahaan 7 m balac iyo 450 miiq dheere dherer ah oo hadda loo isticmaalo waddo gaadiid ah. Baaxadda mashruucan dhexdeeda, aagga oo dhan waxaa loo qorsheeyay in lagu xiro taraafikada gawaarida waxaana loo qorsheeyay sidii xayndaab lugeyn. Intaa waxa u dheer, nooc nooc naqshadeeye ah ayaa loo go'aamiyay biillooyinka si aan joogto ahayn ugu iibiya aagga, iyo 2 unug oo iib ah ayaa loogu talagalay guud ahaan, 5 buffooyin, 20 unugyo iibsi miro iyo 27 iibinta alaabada kala duwan. Marka la eego baaxadda hagaajinta alwaaxa iyo dabaqa, 80 boqolkiiba mashruuca, oo shaqooyinkiisa dhagax-dhiska ka socda ay sii socdaan, ayaa la dhammeystirey.
Yildiz Mountain waxay isku diyaarineysaa xilliga barafka cusub
Xiddigga Buur Mountain ayaa isku diyaarinaya xilliga barafka cusub
Ciberyltepe diyaar u ah xilliga barafka
Star Mountain diyaar u ah xilliga barafka
Diyaarinta Boztepe Landscape
Malabadi Bridge diyaar u ah xilliga dalxiiska
Turkey diyaarinaya snowboarders horyaalka